क्यानरी टापुहरू भाग 1 र भाग 2
प्रश्न क्यानरी टापुहरू भाग 1 र भाग 2
2 महिना2सप्ताह पहिले #1421 by समारोक
विषय दृश्य दृश्य स्थापित गर्न कोशिस गर्दैछु र जहाँसम्म म भन्न सक्छु मैले निर्देशन अनुसरण गरेको छु FSX दृश्य प्रदर्शन गरिरहेको छैन। मैले मात्र नगर्ने भनेको मलाई पढ्ने फाईलहरू पढ्नु हो। तिनीहरू स्पेनिशमा छन्। म जर्मनसँग सामना गर्न सक्छु तर स्पेनीले मलाई हरायो, के पासा भन्दा बाहेक। कुनै पनि मदत धेरै सराहना हुनेछ।
अग्रिम धेरै धन्यवाद।
1 महिना4दिन पहिले #1442 by nincol
म तपाईंलाई क्यानरी टापुमा अवस्थित स्पेनमा रहेको यस ठाउँको भ्रमण गर्न सिफारिस गर्दछु। यसलाई ग्रान क्यानारिया भनिन्छ र यो स्पेनमा अवश्य भेटघाट हो। म र मेरा साथीहरूले स्पेनको लागि उडान बुकिंग गर्यौं र यस टापुको भ्रमण गर्न केहि मिनेट पनि खर्च गरेनौं। । तपाईंले आफैंले यो जाँच गर्नु पर्छ। यहाँ थप पढ्नुहोस् www.canaryislandsinfo.co.uk/tenerife/places/los-cristianos/ । ठाँउ सम्बन्धी बढी जानकारी को लागी।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: समारोक
1 महिना2दिन पहिले #1444 by Lingwell18
तपाईंले अनस्क्रिन निर्देशनहरूको पालना बाहेक अरू केहि गर्नुपर्दैन। पुन: स्थापना प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईंले सेटअपमा कोरक्ट बक्समा टिक गर्नुभयो? तपाईंले टिक गर्नुभयो? FSX वा शायद FSX यसको सट्टा भाप? यो सजिलो स्थापना थियो जब मैले यो गरें। मलाई निश्चित रूपमा स्पेनिशमा केहि पढ्न आवश्यक पर्दैन! lol केवल एक पुनर्स्थापना प्रयास गर्नुहोस् र सावधानीपूर्वक निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।
3 सप्ताह3दिन पहिले #1448 by thaman22
tienes que mirar siempre las carpetas, y instalar n la biblioteca del FSX लास कार्पेटस क्यु टेन्गा सीनरी वाई बनावट क्यू टिने क्वी ईस्टार डेंट्रो डे क्यानरी पार्ट एक्सएनयूएमएक्स y क्यानरी भाग एक्सएनयूएमएक्स
तर FSX कुनै te las recoce en el simulador
3 सप्ताह3दिन पहिले #1449 by thaman22
तपाईलाई सधैँ फोल्डरहरू हेर्नु हुन्छ र स्थापना गर्नुहोस् FSX क्यानेरी भाग 1 र क्यानरी भाग2भित्र हुनुपर्छ दृश्य र बनावट फोल्डर छ पुस्तकालय
तर FSX सिम्युलेटरमा तपाईंलाई चिन्न सक्दैन